Somaliland: Sarkaal Ka Mid Ahaa Sirdoonka Oo Naftiisa Khaarajiyay - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Somaliland: Sarkaal Ka Mid Ahaa Sirdoonka Oo Naftiisa Khaarajiyay
Hargeysa(ANN)Sarkaal ka tirsanaa sirdoonka Somaliland ee ka hawlgala xarunta gobolka Maroodi-jeex, ayaa ku geeriyooday xarunta ciidanka ee magaalada Haregysa caawa caweyskii, waxyar kadib markii halkaa laga maqlay rasaas.
Sarkaalkaa oo ku geeriyooday rasaasta ka dhacday xarunta gobolka ee Sirdoonka oo aan ka fogayn dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa, ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Axmed Raaqib oo ahaa Nin dhalinyaro ah oo da’diisa lagu qiyaasay 30-32 jir.
Ma jiraan warar kasoo baxay Hay’addaha amaanka oo sheegaya sababta geerida marxuumkaa, balse warar shebkadda warar Araweelo News Network ka heshay ila wareedyo ka ag dhow ayaa sheegay in Marxuumku isku khaarajiyay goobtaa oo ay xiliggaa ku sugnaayeen saraakiisha gobolka ee Sirdoonka iyo Askar ka mid ah kuwa ka hawlgala xaruntaa. kadib rasaas uu la beegsaday naftiisa.
Maydka Marxuumka ayaa la geeyay Cusbitaalka Guud ee Magaalada Hargeysa, iyadoo aan si dhab ah loo ogayn wararka sheegaya inuu sarkaalku is toogtay iyo sababta ku kaliftay.
Marxuum Maxamed Axmed Raaqib wuxuu ka mid ahaa dhalinyaro dhawrkii sanadood ee u danbeeyay ku biiray Hay’adda Sirdoonka Qaranka, isagoo ka mid ahaa dhllinyaro uu xilligii xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo qoray Taliyihii hore ee sirdoonka MM Nuur Guuto-Liqe.